Inona ny lalàna CAN-SPAM? | Martech Zone
Inona ny lalàna CAN-SPAM?
Alatsinainy, May 9, 2016 Talata, May 10, 2016 Douglas Karr
Ny lalàna mifehy an'i Etazonia momba ny mailaka ara-barotra dia nifehy tamin'ny taona 2003 teo ambanin'ny Ny lalàna CAN-SPAM an'ny Komisiona federaly. Raha efa folo taona mahery izay… mbola manokatra ny boaty fampidirako isan'andro amin'ny mailaka tsy misy fangatahana aho izay misy fampahalalana diso ary tsy misy fomba azo isafidianana. Tsy azoko antoka ny fahombiazan'ny lalàna na dia teo aza ny fandrahonana hatramin'ny $ 16,000 isaky ny fandikan-dalàna.
Mahaliana fa ny lalàna CAN-SPAM dia tsy mitaky alalana handefa mailaka ho lalàna momba ny fandefasan-kafatra any an-kafa efa nametraka. Ny zavatra takian'izany dia ny zon'ny mpandray anao hampiato ny mailakao amin'izy ireo. Izy io dia fantatra amin'ny fomba opt-out, izay matetika omena amin'ny alàlan'ny rohy tsy misy famandrihana tafiditra ao amin'ilay bokin'ny mailaka.
izany torolàlana ho an'ny vao manomboka amin'ny CAN-SPAM Act avy amin'ny EverCloud dia hanome anao ny fampahalalana rehetra ilainao ho fantatra mba hahazoana antoka fa manaraka ny lalàna ianao.
Fepetra ilaina amin'ny lalàna CAN-SPAM:
Aza mampiasa fampahalalana lohateny diso na diso. Ny "From", "To", "Reply-To", ary ny fampandehanana vaovao - ao anatin'izany ny anarana nomena sy ny adiresy mailaka - dia tokony ho marina sy hahafantatra ilay olona na orinasa nanangana ny hafatra.
Aza mampiasa andalana foto-kevitra mamitaka. Ny andalana ny lohahevitra dia tsy maintsy maneho taratra ny atin'ny hafatra.
Ampahafantaro ny doka ho doka. Manome anao làlana betsaka amin'ny fomba fanaovana izany ny lalàna, saingy tsy maintsy ambaranao mazava sy miharihary fa ny hafatrao dia doka.
Lazao amin'ireo mpandray ny toerana misy anao. Ny hafatrao dia tsy maintsy ampidirina ny adiresy paositra ara-batana anananao. Ity dia mety ho ny adiresy an-dalanao amin'izao fotoana izao, boaty paositra iray izay nosoratanao tamin'ny US Post Service, na boaty mailaka manokana izay nosoratanao tamina maso ivoho nahazo maso iorenan'ny fehezan-dalàna mifehy ny Paositra.
Lazao amin'ireo mpandray ny fomba hialana amin'ny fandraisana mailaka ho avy aminao. Ny hafatrao dia tsy maintsy misy fanazavana mazava sy miharihary momba ny fomba ahafahan'ny mpandray misafidy tsy hahazo mailaka avy aminao amin'ny ho avy. Ataovy amin'ny fomba mora ilay fampandrenesana amin'ny fomba mora ho an'ny olon-tsotra hahafantatra, hamaky ary hahatakatra. Ny fanatsarana ny haben'ny karazany, ny lokony ary ny toerana misy azy dia afaka manatsara ny fahazavana. Omeo adiresy mailaka miverina na fomba hafa mifototra amin'ny Internet ahafahan'ny olona mampita ny safidiny aminao. Azonao atao ny mamorona menio ahafahan'ny mpandray tsy misafidy ireo karazana hafatra sasany, saingy tsy maintsy ampidiro ny safidy hampiatoana ny hafatra ara-barotra rehetra aminao. Hamarino tsara fa tsy manakana ireo fangatahana tsy nety ireo ny sivana spam anao.
Manome voninahitra avy hatrany ny fangatahana opt-out Ny rafitra opt-out apetrakao dia tsy maintsy afaka mandrindra ny fangatahana opt-out mandritra ny 30 andro farafaharatsiny aorian'ny andefasanao ny hafatrao. Tokony hanaja ny fangatahan'ny opt-opt ho an'ny mpangataka ianao ao anatin'ny 10 andro fiasana. Tsy afaka mandoa sarany ianao, mitaky ny hanome anao ny mombamomba anao manokana mihoatra ny adiresy mailaka ny mpandray, na manao izay tsy tokony hataon'ny mpandray anjara hafa ankoatry ny fandefasana mailaka valiny na fitsidihana pejy iray amin'ny tranokala Internet ho fepetra iray hanomezam-boninahitra fangatahana tsy hiala. Raha vao miteny aminao ny olona fa tsy te-handray hafatra bebe kokoa avy aminao izy ireo, dia tsy afaka mivarotra na mamindra ny adiresy mailakao izy ireo, na dia amin'ny endrika lisitry ny mailaka aza. Ny tokana tokana dia ny famindranao ireo adiresy amin'ny orinasa nokaramanao mba hanampiana anao hanaraka ny lalàna CAN-SPAM.
Araho maso izay ataon'ny hafa amin'ny anaranao. Mazava ny lalàna fa na dia manakarama orinasa hafa hikarakara ny marketing amin'ny mailakao aza ianao dia tsy afaka miala amin'ny andraikitrao ara-dalàna hanaraka ny lalàna. Samy tompon'andraikitra ara-dalàna na ny orinasa misy dokambarotra avoakan'ny hafatra sy ny orinasa mandefa ny hafatra.
Ny fiantohana ny fanajana ny lalàna CAN-SPAM no dingana voalohany ahazoana ny mailakao amin'ny alàlan'ny sivana amin'ny mailaka sy ao amin'ny boaty fisoratana anarana ho an'ny mpamandrika. Ny fanarahana ny CAN-SPAM dia tsy midika hoe hiditra amin'ny boaty mailaka ny mailakao! Mety mbola tafiditra anaty lisitra mainty sy voasakana ianao, na alefa mivantana any amin'ny fako junk arakaraka ny fahafahanao mitondra, ny lazanao ary ny fametrahana boaty. Mila fitaovana amin'ny antoko fahatelo ianao toa 250ok noho izany!
Tags: afaka mihetsika ve ny spamCan-amin'ny spamhafatra ara-barotrakomisiona federalyftchiala Anaranasivana spamlamandy spammailaka transactionalserivisy paositra ho anayinona ny fihetsika mety amin'ny spam
Ny Curve Benchmark curve amin'ny findain'ny mpampiasa fampiharana finday
Inona no tokony ho fantatry ny mpivarotra momba ny fiarovana ny fananana ara-tsaina